ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား ရှင်ပေါလု Pogba ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Paul Pogba အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်သူ၏ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အစောပိုင်းဘဝ၊ မိဘများ၊ မိသားစုအချက်အလက်များ၊ ဇနီး၊ ကလေးများ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Pogba ရဲ့အစောပိုင်းအချိန်ကစပြီးသူကျော်ကြားလာချိန်အထိသူ၏ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့အံ့သြဖွယ်ဆံပင်နှင့်အစွမ်းထက်ထိုးစစ်စွမ်းရည်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောပေါလုကို Pogba ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Paul Pogba ကလေးဘဝပုံပြင်
ရှင်ပေါလု Labile Pogba မှာမတ်လ 15 ၏ 1993th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Lagny-sur-Marne, ပြင်သစ်။ သူကသူ့ကွန်ဂိုမိခင်, Yeo Moriba ရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအစောပိုင်း 1990s စဉ်အတွင်းရေကြည်ရာမြက်နုရာရှာပြင်သစ်မှရွှေ့ပြောင်းသောမိမိဂီနီဖခင် Fassou Antoine မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ့မိဘ, ပြင်သစ်မှတိုင်းပြည်မှာသူတို့ရဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်လုံခြုံသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက် Pogba လမှမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။ မတိုင်မီကရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့ကလေးမွေးဖွားရန်, Yeo (Pogba ၏မိခင်) တွင်ကျန်ရစ်တဲ့သူ Florentine နှင့် Mathias အမည်ရှိအမွှာအစုတခု (ပေါလု Pogba ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ဦးကညီအစ်ကိုတွေ) ရှိခဲ့ Conakry, ဂီနီ (အာဖရိကမှာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တိုင်းပြည်) အကြာတွင်ပြင်သစ်နှစ်အတွင်းမိသားစုမဝင်ခင်ပြင်သစ်၎င်းတို့၏မိဘများ '' ရွှေ့ပြောင်းပြီးနောက်။
Paul Pogba မိသားစုအချက်အလက်များ
ရှင်ပေါလု Pogba '' testosterone '' ရာအိမ်, အထီးကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အိမျမှလာသညျ။ Fassou Antony Pogba (ပေါလု Pogba ရဲ့အဖေ) ကနှိမ့်ချခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာမတ်ေတာရှိတဲ့လူပဲ။ သူက (ဘောလုံး) မိမိသား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများကြီးထိတွေ့ဆက်ဆံပါဘူးနှင့်ပေါလု Pogba နှစ်ပေါင်းများစွာယျတျောနှငျ့အတူရငျးနှီးတဲ့ဆကျဆံရေးတည်ထောင်ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ သို့သော် Pogba သူ၏မိခင်နှင့်အတူအားကောင်းနှောင်ကြိုးဝေမျှပေးသည်။
Paul Pogba ၏မိခင်အကြောင်း
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့မိခင် (Yeo Moriba Pogba) ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံးဘောလုံးသမားနောက်ကွယ်မှစီးပွားရေးဦးနှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ (အောက်တွင်ပုံ) ဤဂုဏ်ယူ '' supermum '' ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်လာရန်ကြီးပြင်းသူသုံးယောက်ျားလေးများကြီးပြင်းကူညီပေးခဲ့သည်။
သူမ၏နောက်ဆုံးသား '' ရှင်ပေါလု Pogba '' နှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံရေးမျိုးစတင်ခြင်းကနေအထူးညာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမနောက်ဆုံးမွေးဖွားကလေးကဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများခံစားအဖြစ် adored နှင့်သူ့ကို pampered ရရှိနိုင်မည်။ တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရမှာတော့သူမကကွဲပြားခြားနားသူမ၏အခြားသားကနေသူ့ကိုကုသ။
Paul Pogba ၏အစ်ကိုများအကြောင်း
အဆိုပါဘောလုံးပြိုင်ပွဲအစ်ကိုတွေ (Mathias နှင့် Florentine) အမြဲ '' သည်သူ၏နောက်ကျောတယ် '' ရှိသည်။ သူတို့သည်လည်း (အချိန်မှာ) မိမိတို့၏ဆိအစ်ကိုအောက်ကပုံထဲမှာထင်ရှားအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များ၏ဗဟိုအဆင့်ကကြာကြောင်းအာမခံပါသည်။
Paul Pogba ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ဘောလုံးနှင့်အစောပိုင်းနှစ်များ -
ရှင်ပေါလု Pogba ကိုအမေရိကန် Roissy-my-တွေဖြစ်တဲ့အနည်းငယ်မိုင်တောင်ဘက်ကသူ့ဇာတိမြို့၏ခဲ့တဲ့ဘောလုံးကလပ်အဘို့ကစားခြောက်လ၏အသက်အရွယ်မှာမိမိဘောလုံးကစားသမားဘစတင်ခဲ့သည်။
သူဟာကလပ်ရဲ့အောက်မှာ-13 အသင်းကပ္ပတိန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရှိရာအမေရိကန် Torcy, မဝင်ခင်ကလပ်မှာခုနစျပါးရာသီကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
သိပ်မကြာခင်မှာသူဟာကျော်ကြားတဲ့ Le Havre အကယ်ဒမီကို (၁၃) နှစ်အရွယ်တွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးသူဟာအသက်အရွယ်အုပ်စုများမှတစ်ဆင့်တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှထိပ်တန်းဥရောပကလပ်များရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အထင်ကြီးလောက်သောဖျော်ဖြေပွဲများပြသခဲ့သည်။
Paul Pogba ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ကျော်ကြားမှုလမ်း။
Pogba သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ယူနိုက်တက်သို့ရောက်ရှိနေပြီဟုကြေငြာသောအခါ Le Havre သည်အံ့အားသင့်သွားပြီး Red Devils ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ "အရမ်းကြီးတယ်" ပိုက်ဆံခု၏ - နှင့်အိမ်တအိမ် - စောလွန်းရှိပြီးသားစာချုပ်အဆုံးသတ် Pogba ရဲ့မိဘများရန်။
သည် Le Havre သူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုလေမှကြေညာချက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် unbecoming နှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များ၏ uncharitable ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ယူဆ။
"မြောက်မြားစွာပါတီများကို 'အရွယ်မရောက်သေးသူ၏ကုန်သွယ်' 'ဆန့်ကျင်ထွက်စကားပြောသည့်အခါတစ်ဦးထိုအချိန်တွင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တစ် 16 နှစ်အရွယ်ဆိနှုတ်ဖို့ချီတုံချတုံမထားဘူး။ "
သို့သော်ယူနိုက်တက်ဖီဖာနှင့် Le Havre နေဖြင့်မည်သည့်အမှား၏ရှင်းလင်းခဲ့သည်မန်ချက်စတာသရဲနီတို့နှင့်အတူသဘောတူညီချက်သို့ရောက်ရှိနေဖြင့်သံတမန်ရေး၏လမ်းကြောင်းအယူခံပေမယ့်ကိုနင်းဖို့မရွေးချယ်။
ရှင်ပေါလု Pogba2ထံမှ 2009 မှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘ၏နောက်ဆုံး 2011 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ ဒါဟာ Pogba တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းယူနိုက်တက်မှာကြီးလုပ် ယေရှဲ Lingard သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်။ ယေရှဲ (Pogba နှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ) ကိုတစ်နှစ် 2000-2011 ကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့သူ့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
Paul Pogba ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - ထမြောက်ခြင်းသို့ပြန်သွားသည့်အဖြစ်အပျက် -
Pogba ဂျူဗင်တပ်စ်သူလေးနှစ်ဆက်တိုက်စီးရီးအေခေါင်းစဉ်အနိုင်ရအဖြစ်အီတာလီယာဒုတိယနှင့်စူပါအီတလီခေါင်းစဉ်၏နံပါတ်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့ကလပ်အားမိမိအပြောင်းအရွေ့လှုံ့ဆော် playtime မရှိခြင်းမတိုင်မီယူနိုက်တက်မှာသုံးနှစ်ကြာနေခဲ့ရသည်။
မိမိအသူရဲကောင်း 89.3 အတွက်£ 2016 သန်းပေါင်တစ်ကလပ်စံချိန်တင်ကြေးအဘို့အမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အားမိမိပြန်လာလုံခြုံ။ နှစ်နှစ်အကြာသူ 23 ယောက်ျား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် ပြင်သစ်ကစားသမား သောအနိုင်ရ 2018 ကမ္ဘာ့ဖလား ခွက် ရုရှားမှာ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Paul Pogba အချစ်ဇာတ်လမ်း:
ရှင်ပေါလု Pogba, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မင်းသမီးနှင့်အတူတက် hooking ကနေနာမကိုအမှီမာရီယာ Salaues အားဖြင့်ဝင်တစ်ဦးလှပသောဖျားခါသို့မဟုတ်ရည်းစားပိုင်ဆိုင်သူ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ထင်ရှားသောတကယ်တော့ကွာရှက်ဖို့တဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။
မာရီယာ Salaues သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမိုင်ယာမီကြောင့်ခက်ခဲသူမ၏မန်ချက်စတာမှာသူမ၏ heartthrob သွားရောက်စေသည်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှာအခြေခံသည်တစ်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 23 နှစ်အရွယ်ဘိုလီးဗီးယားနှင့်အတူ Pogba ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနိမ့်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ထားရှိမည်ခဲ့ပြီးသော်လည်းနှစ်လုံးကိုသူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဂိမ်းထဲမှာမှီထားသောအဆင့်အထိအကြံပြုကြောင်း key ကို outings ၏နံပါတ်စေပြီ။
သူတို့ပထမဦးဆုံးအတူတကွပြောက်ခဲ့ကြသည့်အခါမိမိတို့၏ချိန်းတွေ့အချိန်ဇယားပေါ်ပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင် outing 2017 ၌ရှိ၏။ ဇွန်လ 2018 မာရီယာ Salaues မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့သူမဒိန်းမတ်ဆန့်ကျင်ပြင်သစ်ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုတစ်စုဂိမ်းအတွင်းမော်စကိုရဲ့ Luzhniki အားကစားကွင်းမှာ Pogba ရဲ့မိခင်အနားမှာတစ်ဦးထိုင်ခုံကိုယူအဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်တူအဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်ထင်ရှား။ ,
Paul Pogba မိသားစုအရင်းအမြစ်များ
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့ဧရာမအရပ်တိုင်းအတိုက်အခံဘောလုံးသမားများအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုပါပဲ။ သုတေသီများအဆိုအရသည်သူ၏တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်အဖြစ်အနက်ရောင်အားကစားသမား၏စရိုက်များမှခြေရာခံတစ်ဦးဘိုးဘွားအမြစ်ရှိပါတယ် Kobe မြို့ Bryant အဘယ်သူသည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတစ်ခုဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးမှလာကြ၏။ မိမိအခွက်တဆယ်ကိုပေါလု Pogba ရဲ့ခိုင်မာတဲ့, ဧရာကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းနှင့်ကြီးမားသူ့ကိုရွယ်တူချင်းအကြားထွက် Edge ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
မိမိအအလားအလာဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏ကတိသစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမဘောငျသိတယ်နှင့်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမဟုတ်ပါဘူး။ သူ 16 ၏အသက်အရွယ်မှာပြင်သစ်ထွက်ခွာကတည်းကသူ့ကိုယ်ပိုင်အရိုးအကြောအဆစ်နှင့် dietician အလုပ်သိရသည်။ မိမိအအရိုးအကြောအဆစ်နှင့် dietician သူဂိမ်းအပြီးညာဘက်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုရရှိသွားတဲ့နှင့် Off-ရာသီကာလအတွက်တင်းကျပ်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှစောင့်ရှောက်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
Paul Pogba ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ - အချောလှုပ်ရှားမှု -
ရှင်ပေါလု Pogba သည်သူ၏တာဝေးပစ်ပစ်ခတ်မှုပါဝါတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်သူ၏နည်းဗျူဟာများနှင့်ရှင်သန်မှုကျွမ်းကျင်မှုများ၏တိုးတက်မှုအတွက်သူ့ကိုကူညီပေးဖို့ဒီအမာခံလေ့ကျင့်ရေးပါဘူး။ မိမိအ kickboxing ကျွမ်းကျင်မှုသူသည်မိမိသွားရာလမ်းပေါ်တွင်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သည်မည်မျှအဆင်သင့်ဖော်ပြသည်။
ရှင်ပေါလု Pogba ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ကခုန်ရွှေ့
Pogba သူအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပအခါတိုင်းသူရမှတ်များအတွက်အသုံးပြုအများအပြားကခုန်ခြေလှမ်းများနှင့်အတူပရိတ်သတ်များဧည့်ခံခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလု Pogba ကသူ၏အသင်းဖော်တွေနဲ့အသစ်တခုကအခုန်အပြောင်းအရွေ့လေ့ကျင့်ကိုအောက်တွင်ရှုမြင် ယေရှဲ Lingard.
ယင်းနှစ်လုံးကိုသူကသီဆိုခဲ့ပါတယ်ဖို့အားထုတ်သောသီချင်း, တစ်ချိန်ကနိုင်ဂျီးရီးယားမွေးဖွားအနုပညာရှင်ခဲ့သည် Wizkid ။
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးပုံပြင်
Pogba ဘယ်နေရာမှာမှအပြင်သစ်အကြီးတန်းအဖွဲ့သို့ဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ U16 အဆင့်ကနေ U20 '' Espoirs '' ကစားသမားမှက Les Bleus သူ့ရဲ့ပွဲစတင်ခဲ့သည်။
သူ U2013 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာဘုန်းအသရေမှပြင်သစ်ဦးဆောင်သောအခါ, မိမိအအကောင်းဆုံးသောနာရီ 20 လာ၏။ အဆိုပါကွင်းလယ်လူဥရုဂွေးဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့အတွက်ပြစ်ဒဏ်ပြောင်းလဲနှင့်ပြိုင်ပွဲ၏ကစားသမားအမည်ရှိ၏, ဘေးထွက်အသင်းခေါင်းဆောင်။
ရှင်ပေါလု Pogba လည်းအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအတွက်ဇူလိုင်လ 20, 13 ပေါ်လီ Sami အဘိဓါန်ယန်း Arena မှာပြင်သစ်နဲ့ဥရုဂွေးတို့အကြားဖီဖာဦး-2013 ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲစဉ်အတွင်း Addidas ရွှေဘောလုံးဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
Paul Pogba ၏ညီအစ်ကိုများဘောလုံးအလုပ်အကိုင်များ
သင်သိပါသလား ... ပြင်သစ်စူပါစတား၏အစ်ကိုများ Florentine Pogba နှင့် Mathias Pogba ဘောလုံးသမားများနှင့်အမွှာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူ (နှစ်ဦးစလုံးအမွှာပူး) - Florentine Pogba (လက်ဝဲ) နှင့် Mathias Pogba (ညာ)
သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဂီနီတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ Florentine Pogba (ပုံဘယ်ဖက်ဂီနီ၏လက်ရှိအသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်) အရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်။
Paul Pogba ၏မိဘများအကြောင်း -
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမိမိအမိကွန်ဂိုမူရင်းနေစဉ်, Pogba ရဲ့အဖေဂီနီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့သားနဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်။ သို့သျောလညျး, ပေါလု Pogba ရဲ့မိခင်ကပိုသည်သူ၏အောင်မြင်မှုတိုင်းခြေလှမ်းမှာသူနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဖေနိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူအဆင်ပြေခံစားရနှင့်သူ၏သားတို့၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမထားဘူး။
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့မာမီနှင့် Daddy
ပြီးတာနဲ့အချိန်ပေါ်၌မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 85,000 အတွက်သူတို့နှင့်အတူနေရန်သူတို့၏သား (ပေါလု Pogba) woo တစ်ဦးလေလံအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမိဘတွေကို£ 2009 တစ်ခုချင်းစီကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ထင်လဲ?။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးငွေလက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာသူတို့၏သားရဲ့ပထမဆုံးစာလုံးပေါင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
Paul Pogba ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - သူ၏အပြောင်းအလဲများအပေါ်သူ၏မိခင်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးပုံ -
သူမသည်မကြာခဏ '' အချိန်မအတွက် multi-ဒေါ်လာသန်းကံဇာတာသို့သူမ၏သားသညျပေါလု Pogba လှည့်သူ Supermum နှင့်ဘောလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူဌေးကြီး tagged ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စ Yeo Moriba သူမ၏သားရဲ့အေးဂျင့်, မန်နေဂျာနှင့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကောလဟာလသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်။ သူမလည်းသူမနဲ့အခြားအမွှာ၏သားများ (Florentine နှင့် Mathias) ဂီနီ International ၏နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တူညီအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
သူမသည်သူမ၏သားကလပ်မှာဆက်နေစေသူမ၏လာအောင်အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ထံမှဖိအားရှိနေသော်လည်းသူ့အဘို့ထိုအရပ်၌ရပ်နေ၏။ ဖာဂူဆန်နှင့်အတူသူမ၏တှေ့ဆုံအကြောင်းကိုမေးသောအခါသူမကသူမ၏သားသညျပေါလု Pogba ၏အနာဂတ်ကျော်နှင့်အတူထိပ်တိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်တော်မူသောကွောထွ-Man U သူဌေးနှင့်အတူသူမ၏အများအပြားထိပ်တိုက်တွေ့တဦးပြန်ပြောပြအဖြစ်, Yeo Moriba ရယ်။
ဖာဂူဆန်အကြှနျုပျ၏ house..I မှကြွလာသည့်အခါ "သေချာသူစိတ်ပျက်အရွက်ပါစေ။ အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အသားသည်ပေါလု-နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြန်လည်မည်မဟုတ်, သူ့ကိုသို့ပြောသည်။ ဒီရလဒ်အနေနဲ့ဖာဂူဆန်သူ့ကိုတွန်းသူ, ပေါလုသည်တယောက်တည်းကငါ့ကလေးကသူ့ကိုမကစားခဲ့ပါ။ သူကပင်သူအားရစရာကြီးလမ်းကိုကျော်ဖာဂူဆန်ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာဟစျကျွောလေ၏ed ။ ရှင်ပေါလု Pogba ကြောင့်စိတ်ဆိုးခဲ့ ပေါလ်စခိုးသူမျက်စိတစ်ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်နေရာအရပ်ကယ်တင်ရန်ဇန်နဝါရီလ 2012 ၌သူ၏ခြောက်လအနားယူရာမှပြန်ရောက်လာတယ်။ အချိန်နှင့်လိဂ်ဖလား၌သူ၏နာမတော်ကိုအစားထိုးပွဲရုံစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ 18 သာ, Pogba သူသည်မိမိအခွင့်အလမ်းပေးသင့်သလိုခံစားရတယ်။ လုပ်ဤသည်မှာ ကလပ်မှထွက်ခွာရန်ဒါစိတ်ပိုင်းဖြတ်ငါ၏အသား "။
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခနေသော်လည်းတစ်အံ့ဖွယ်နေဆဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါ့သားဂျူဗင်တပ်စ်အတွက်ထိမှန်ကာချက်ချင်းဖြစ်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်သင်သည်ငါဘောလုံးအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကြလို့ပြောဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ် ", ငါသည်သာမန်မိခင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာငါ့ကို can't-အရူး
မစ္စ Yeo Moriba Pogba နေဆဲသူမ၏သားရဲ့မန်နေဂျာအဖြစ်ဦးဆောင်အရာရှိတဦးကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ခြင်းငြင်းပယ်ထားပါတယ်။ သူမ၏အဆိုအရ;
"ငါသည်သာလျှင်သောသူအပေါင်းတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုတောင်းတာပါ။ ရှင်ပေါလုသည်ငါ့ကိုရိုသေလေးစားသူငါသူ့ကိုပြောပြသမျှကိုနားထောငျ။ "
Paul Pogba ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အဲလက်စ်ဖာဂူဆန်နှင့်ရန်ငြိုးထားခြင်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာမိမိစိတ်ပျက်စရာကြိမ်စဉ်အတွင်း, ပေါလု Pogba ဟာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုစကားလုံးများကိုလူသိများခဲ့သည်;
သူကအကြောက်ကင်းသည်။ သူရထိုက်အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးသောအခါသူထွက် freaks ။ သူပြောဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကျင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်းအထိလမ်းလျှောက်ဖို့ဘောလုံးသူအနည်းငယ်ကြောက်ကင်းကစားသမားတဦးတည်းရှိ၏
'' သခင်, ငါ Play, ငါသည်အလုံအလောကျဖူးထင်, ငါအဆင်သင့်ပါပဲသို့မဟုတ်မပါလျှင်သင်တို့ကိုငါပြဦးမည် '' ။
အောက်ကဗီဒီယိုမှာ, ပေါလု Pogba ၏မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စွပ်စွဲ "မလေးစားတဲ့"'' သူကဂျူဗင်တပ်စ်အားမိမိအပြောင်းအရွေ့ရှေ့ပြေးသူ၏စာချုပ်အငြင်းပွားမှုကာလအတွင်းတစ်ဦးတည်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟုဆိုကာအဟောင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက် '' ။
Paul Pogba ၏ဘာသာတရား:
အစ္စလာမ်ဘာသာအဘို့ရှင်ပေါလု Pogba ငျ့မတ်ေတာ။
တစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, ပေါလု Pogba ကွင်းကိုချွတ်သည်ခိုင်ခံ့သောအစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ သူကအောက်ပါအတိုင်းနှင့်အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားပါသည်။
Paul Pogba ၏အမည်ပြောင် - ဘာကြောင့်သူက 'Octopus' လို့ခေါ်တာလဲ။
Pogba အပေါင်းတို့သည်လမ်းစောင့်ကြည့်ကြသူအများအပြားအဘို့, တဦးတည်းစင်ကြယ်သောရှည်လျားသောခြေထောက်များနှင့်သူနေဆဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးအတွက်ယနေ့အသုံးပြုသည့်သဘာဝအစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးဒီကဗျာအပိုတစ်စုံကိုစောငျ့ရှောကျလိမ့်မယ်။
မိမိအ 6.3 ခွကေိုကြမ်းတမ်းနှင့် elongated အခြေလက်အင်္ဂါအများအပြားဘောလုံးပရိသတ်တွေအားဖြင့်လေးစားကြသည်။ ဒါကပရိသတ်တွေ nicked အဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုအမည်ရှိ ( "ပေါလုသည်ရေဘဝဲ"). ဤသည်နာမတော်ရှည်လျားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြေထောက်၏ရလဒ်အဖြစ်ရောက်လာတယ်။ ပရိသတ်များကသူ့ခြေထောက်တစ်ဦး၏ tentacles တူယုံကြည် ရေဘဝဲ သူ tackles သောအခါ, dribbles ပြေးများနှင့်တာဝေးပစ်ရိုက်ချက်များဒဏ်ခတ်။
Pogba ရဲ့အမွှာအကြီးအကဲတစ်ဦးကညီအစ်ကိုတွေ '' သူ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ပိုနှစ်သက်Pogboomရည်မှန်းချက်အပေါ်သူ၏တာဝေးပစ်အားထုတ်မှုမှ '' ကျေးဇူးတင်စကား။ ဤသည်ကသူ့ဘွတ်ဖိနပ်အပေါ်ရေးထားလျက်ရှိ၏အမည်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Paul Pogba ၏အမည်ပြောင်၏မူလအစ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ''ပေါလုကရေဘဝဲ'' ပု 2010 ကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်းဂိမ်းများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်သူတစ်ဦးလူကြိုက်များရေဘဝဲကနေဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ပေါလု (ယခုနှောင်းပိုင်းနှင့်ကောလာဟလများ Billionaire ပိုင်ရှင်များလောင်းကစားကို Global အားကစားဖြင့်သေခဲ့ကြရန်) ကိုအောင်မြင်စွာကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုဘောလုံးဂိမ်းခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ရှင်ပေါလုသည်, တစ်ဦး box ကိုမြှောင်တိုင်းပြည်က၎င်း၏နောက်လာမည့်ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။
ရှင်ပေါလု Pogba ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိ - LifeBogger အဆင့်
ပေါလု Pogba ကဲ့သို့သောကစားသမားကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံးများအတွက်အလွန်ကြီးမားသောစာရွက်ကိုယ်စားပြုကြောင်းအခိုင်အမာရန်ထိုက်၏။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခေါင်းဖီးနဲ့ snappy စားဆင်ယင်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်ကစားသူ၏စတိုင်သူ့ကိုဖီဖာ-ဗိုမျိုးဆက်တစ် Darling စေသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Find, ပေါလု Pogba lifebogger ရဲ့အဆင့်။
ရှင်ပေါလု Pogba ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
N'Golo Kant ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောနေ့စွဲ: မေလ 25, 2020
Moussa Sissoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်